Madaxweynaha Ukraine oo shaaciyay tirada ciidamada guud ee dagaalka uga dhimatay | dayniiile.com
Home WARKII Madaxweynaha Ukraine oo shaaciyay tirada ciidamada guud ee dagaalka uga dhimatay
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in 3,000 oo askari oo u dhashay Ukraine ay ku dhinteen dagaalka uu Ruushka kula jira halka 10,000 oo kalena ay dhaawacmeen tan iyo markii uu bilowday duulaanka.
Bil ka hor, Zelensky wuxuu qiyaasay in ku dhawaad ​​1,300 oo askari oo ay dhinteen. Balse labada jeerba, wuxuu ku andacoodey in askar badan oo Ruush ah sidoo kale la dilay.
“Ma aha mid ii gaar ah, balse waa walaac uu qabo caalamka oo dhan. Waxaa suuragal ah in xogtaas ay dhab tahay ama ay noqon karto mid been ah,” ayuu yiri Madaxweynaha.
Previous articleWarshada militariga Kyiv oo gantaallo lagu garaacay
Next articleHormuud Salaam Foundation oo deeq lacageed gaarsiisay xarunta maama ugaaso oo lagu xanaaneeyo Caruur lagasoo kala aruuriyay wadooyinka muqdosho
Kulan ay yeelan lahaayeen Golaha Wakiilada Somaliland oo baaqday